Fa maninona ary tonga any Frantsa? Ny tanjaky ny asa any Frantsa
Posted by Tranquillus | Jona 5, 2018 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny firenena tsirairay dia manana ny volavolan-dalàna momba ny asa, ary izy rehetra dia samy manana ny tombony sy ny tsy fahampiana miankina amin'ny toe-javatra. Inona avy ny fananan'i Frantsa? Nahoana no mahaliana ny miasa any Frantsa?
Ny herin'i Frantsa
France dia firenena eoropeanina izay mahaliana ny asa, ary maro ireo fahafaha-manao. Ankoatra ny nofy izay miteraka ao an-tsain'ny maro pirenena vahinyAmbonin'izany rehetra izany dia firenena matanjaka ara-toekarena izay mikasa hanome fiarovana lehibe ho an'ny mpiasa.
Firenena mahasarika ho an'ny tanora nahazo diplaoma
Frantsa dia manana orinasa sy orinasa malaza manerantany. Ireo nahazo diplaoma vahiny vahiny dia tena nalaza tokoa tao amin'ilay faritra. Ny fahalalany, ny fahaiza-manaony ary ny fahitana dia manana tombam-bidy mavesa-danja ary ny governemanta sy ny mpampiasa dia mahalala izany. Izany no mahatonga azy ho mora ny ho avy mba hipetraka any Frantsa ary hiasa amin'izany.
Ny dimy amby telopolo ora sy ny SMIC
Ao Frantsa, ny mpiasa dia mahazo ny fifanarahana mandritra ny dimy amby telopolo ora isan-kerinandro. Izany dia ahafahana manangona fiainana tsy voatery manangona asa marobe, ary manome antoka ny fidiram-bola kely indrindra amin'ny faran'ny volana. Ankoatra izany, azo atao ny mampifandray asa maro ho an'ireo izay maniry ny hanokana tanteraka ny fiainany. Tsy ny firenena rehetra no manolotra io fiarovana io.
Etsy ankilany, i Frantsa dia nampiditra karama farany ambany, izay antsoina hoe SMIC. Ity dia tahan'ny ora fohy. Na inona na inona toerana voatondro, ho an'ny ora Xnumx isam-bolana, ny mpiasa dia mahazo antoka fa mahazo ny karama mitovy. Ny mpampiasa dia tsy nahazo alalana hividianana ambany noho izany.
Isan'andro dia miasa ny zo amin'ny fialan-tsasatra roa andro sy tapany, izay mifanaraka amin'ny herinandro dimy isan-taona. Zon'ny olom-boafidy ary mandray soa avy amin'izany ny mpiasa rehetra. Etsy ankilany, ireo mpiasa izay miasa miasa sivy sy sasany sivy isan-kerinandro dia manangona RTT. Noho izany dia mahazo fandaniana herinandro folo, isan-taona izy ireo, izay tena manan-danja.
Ireo olona nanao sonia fifanarahana momba ny faharetan'ny fotoana tsy voafetra dia voaro. Tena sarotra ho an'ny mpampiasa ny manala mpiasa amin'ny fifanarahana maharitra. Ao Frantsa, miaro ny mpiasa ny lalàna miasa. Ankoatr'izany, raha misy ny fandroahana dia mandray soa ny mpiasa mandritra ny efatra volana fara-fahakeliny, ary indraindray mandritra ny telo taona aorian'ny fandroahana azy. Miankina amin'ny faharetan'ny asa teo aloha izany. Na izany na izany dia manome fiarovana izy ary manolotra fotoana mahafinaritra hitadiavana asa any Frantsa.
Ny fahavitrihan'ny toekarena Frantsay
Frantsa dia firenena matanjaka ara-toekarena izay manana toerana ambony eo amin'ny toekarena manerantany. Manintona tokoa ny firenena eo imason'ny mpampiasa vola izay tsy misalasala mametraka ny fitokisany amin'ny fahalalàn'ny Frantsay. Mahatratra 6% amin'ny varotra manerantany ary 5% amin'ny harin-karena faobe global izao.
Amin'ny ankapobeny, ny firenena dia eo an-tampon'ny indostrian'ny famokarana, ary faharoa ao amin'ny sehatry ny varotra sy ny sehatry ny fambolena. Amin'ny lafiny famokarana, i Frantsa dia laharana fahatelo eto amin'izao tontolo izao. Noho izany, ny firenena dia nomena tokoa ho fiaraha-monina amin'ny orinasa lavitra. Ny orinasa Frantsay 39 dia anisan'ireo orinasa lehibe indrindra 500 eto amin'izao tontolo izao.
Ny fiantraikan'ny fahalalana Frantsay
Ny " vita any Frantsa Izy io dia antoky ny kalitao ankasitrahana amin'ny sandany marina manerantany. Ireo mpanao asa tanana miasa any Frantsa dia tena mazoto miasa saina ary manolotra vokatra sy serivisy avo lenta foana. Raha atotaly dia misy orinasa mpanao asa tanana 920. Ny fiasa any Frantsa dia ahafahanao mianatra sy mampihatra teknika asa mandroso fantatra eran'izao tontolo izao.
Frantsa dia firenena iray ahitana orinasa goavana mametraka ny fitokisany amin'ny fanatanterahana ny vokatra. Ny fampiroboroboana dia ankolaka matetika ary ny firenena vahiny dia amateur ny vokatra eto an-toerana. Ny fanatsarana ny fahalalàna ny teny frantsay dia ahafahan'ny firenena vahiny mahazo traikefa.
Ny kalitaon'ireo toeram-pampianarana
Tsy mahalana ny mahita vahiny vahiny mianatra any Frantsa amin'ny fanantenana hahita asa mahafa-po. Raha ny marina, ny toeram-pampianarana ambony any Frantsa dia manana kalitao avo. Matetika izy ireo no mahavita mitady asa any amin'ny sehatry ny fianarana amin'ny faran'ny fianarana. Ankoatr'izany, mitranga ny fisian'ireo teratany any Frantsa ary miasa any mba hanome ny zanany ny fahafahana mahazo tombontsoa amin'ny injenier'ny sekoly sy ny oniversite. Ankoatry ny fitadiavana fiantohana fiarovana, manome fahafahana lehibe ho an'ny zanany izy ireo mba hiditra amin'ny asan'ny safidiny.
Frantsa dia anisan'ireo firenena ambony indrindra amin'ny kalitaon'ny fiainana. Io fampiononana sy fahafahana hiaina amim-piraisan-tsaona ny vahiny. Ny fiainana any Frantsa dia manome anao ny fidirana amin'ny iray amin'ny rafitra fitsaboana ireo mpandray anjara tsara indrindra eran-tany. Ny WHO dia nitarika fotoana voalohany tany Frantsa. Ny mpianatra vahiny koa dia mandray soa amin'ny fiarovana ara-tsosialy ao Frantsa.
Ankoatra izany, i Frantsa dia iray amin'ny fiainana andavanadro lava indrindra eran'izao tontolo izao. Izany dia vokatry ny rafi-pahasalamana sy ny kalitaon'ny fikarakarana. Mponina vahiny maro no misafidy mba hipetraka any Frantsa mba hahazoana tombony amin'ity fiainana ity.
Farany, ny vidin'ny vokatra sy ny tolotra any Frantsa dia oharina amin'ny salan'isa raha oharina amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao.
Frantsa dia manana kolontsa-kolontsaina tena manintona izay manintona fahalianana manerana izao tontolo izao. Araka izany, mitranga ny fisian'ny teratany vahiny sy miasa any Frantsa mba hiondrana any amin'ny faritra misy ny firenena, hianatra ny fiteny ary hahita tontolo iainana miasa. Amin'izao tontolo izao, i Frantsa dia manana laza tsara ho an'ny fiainany.
Ny olom-pirenena vahiny dia misafidy an'i Frantsa amin'ny heriny, ny heriny ara-toekarena ary ny fiarovana ny mpiasa. Adiny dimy amby telopolo sy ny fialan-tsasatra dia ny tombontsoa azon'ireo mpiasa Frantsay. Noho izany, tsy ny firenena rehetra no manolotra azy ireo amin'ny mpiasa. Ireo vahiny avy any ivelany dia tonga amin'ny kalitaon'ny fiainana sy ny fiarovana amin'ny asany rehefa mivezivezy any Frantsa izy ireo.
Nahoana no mipetraka sy miasa any Frantsa? May 14th, 2020Tranquillus
Teo alohaAhoana no tsy hahasosotra ny asany?
manarakaAhoana no fomba handaminana ny sehatrasanao?